Degso uTorrent loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (2.29 MB)
UTorrent waxay u taagan tahay macmiil durdur sare leh oo aad ka soo dejisan karto togag bilaash ah kombiyuutaradaada. Mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan macaamiisha Bittorrent, uTorrent sidoo kale waa la door bidaa maxaa yeelay waa il furan.
Soo dejiso uTorrent
Iyada oo ay interface si fudud loo isticmaali fudud, size file yar, rakibo fudud iyo qaababka kale ee horumarsan, software ah oo ka dhex muuqda barnaamijyo badan oo durdur ah oo suuqa ku jira ayaa shaki laaan ah soo dejiyaha daadka ugu isticmaalka badan adduunka.
UTorrent, oo kuu oggolaanaya inaad kala soo baxdo faylal badan oo durdurro isku mar ah, waxaad si fudud ugu habayn kartaa inta leeg baaxadda ballaadhan ee aad rabto inaad u adeegsato soo dejintaada adoo u qaabeynaya isku xirnaanta internetka sida aad rabto. Sidan oo kale, waad ku sii wadi kartaa inaad dhex-dhexaadiso internetka adoo dajinaya durdurro.
Barnaamijka soo dejinta togga, oo leh otomaatig xiritaan, soo dejin qorsheysan, raadin durdur, kormeer inta lagu guda jiro soo dejinta, hagaajinta baaxadda iyo amniga oo horumarsan, ayaa sidoo kale u adeegsanaya agabyada kombiyuutarkaaga heer aad u hooseeya. Sidaa darteed, kombiyuutarkaagu ma keenayo wax turunturo ama burburin inta lagu jiro soo dejinta faylka.
Haddii aad u baahan tahay macmiil Bittorrent bilaash ah oo horumarsan si aad ula soo degsato faylasha leh fidinta .torrent, waxaad ku bilaabi kartaa adeegsiga uTorrent adigoo ku soo dejinaya kombiyuutaradaada adigoon ka fikirin
Sidee Loo Dardargeliyaa UTorrent?
Tirada ilaha, faragelinta WiFi, nooca uTorrent, xawaaraha isku xirkaaga iyo dejinta mudnaanta waxay saameyn ku yeelaneysaa xawaaraha soo dejinta feylka. Marka, sida loo dedejiyo qulqulka? sida loo soo degsado durdur deg deg ah Waa kuwan qodobbada aad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeesho si aad u dedejiso uTorrent oo aad u soo degsato faylasha durdurka si dhakhso leh;
Hubi tirinta ilaha feylka durdurka: Ilaha waxaa loo isticmaalaa kuwa kusii socda wadaaga faylka kadib soo dejinta. Kheyraadka badan, si deg deg ah soo degsashada. Isku day inaad kala soo baxdo feylka durdurka tracker leh ilo badan intii suurtogal ah.
Si toos ah kombiyuutarkaaga ugu xir mashiinka / routerka halkii aad ka heli lahayd isku xirka WiFi: Calaamado badan oo guriga yaala ayaa faragalin kara xiriirka khadkaaga wireless; tani waxay saameyn doontaa xawaaraha soo dejinta uTorrent iyo sidoo kale xawaaraha internetka.
Hubi goobaha safka uTorrent: Fayl kasta oo aad ku soo dejiso uTorrent wuxuu adeegsadaa waxoogaa yar oo xawaare ballaadh ah. Marka feylal badan lagu soo dejiyo xawaaraha ugu sarreeya, waqtiga soo dejinta faylasha ayaa dheer. Isku day inaad kala soo baxdo feylasha mid mid. Xulashada - Xulashooyinka - Xulashada Safka waxay dejinayaan tirada ugu badan ee soo dejimaha firfircoon ilaa 1. Sidoo kale u oggolow khariidaynta dekedda uPnP. Tani waxay hubin doontaa in uTorrent uusan ku dhegin darbigaaga oo uu si toos ah ugu xirmo ilaha. Waxaad marin ka heli kartaa goobta ku habboon ee hoos timaadda Xulashada - Xulashada - Xiriirka.
Hubso inaad isticmaaleyso nooca ugu dambeeya ee uTorrent: Hubi inaad si joogto ah u cusbooneysiiso. Waad hubin kartaa haddii nooc cusub loo heli karo inaad kala soo baxdo hoosta Caawinta - Hubi Cusboonaysiinta.
Ku dar trackers badan: Lahaanshaha ilaha badan ee raadraaca ayaa si weyn u kordhin doonta xawaaraha soo dejinta durdurka.
Beddel xawaaraha soo dejinta: Ku qor 0 sida ugu sarreysa (ugu sarreysa) xawaaraha soo dejinta waxaad arki doontaa markii aad riixdo soo dejinta. Waxay qaadan doontaa xoogaa waqti ah xawaaraha soo dejinta inuu kordho, laakiin waxaa jiri doona koror xawaaraha soo dejinta ah marka loo barbar dhigo kii hore.
Hubso in uTorrent la kala hormariyo: Riix Ctrl + Alt + Del ama Ctrl + Shift + Esc si aad u furto Maamulaha Hawsha oo guji Start. Ka raadi uTorrent hoosta Hawsha oo guji midig oo tag Faahfaahinta - Mudnaanta u Deji - Sare.
Hubi goobaha horumarsan: Marka hore, hoosta ikhtiyaarrada - Xulashooyinka - Hormarinta - Kaydka Disk, ka hubi sanduuqa Si otomaatig ah u dul qor cabbirka xusuusta oo cabir gacanta ku dhig gacanta oo ku dhig 1800. Ta labaad, hoosta Ikhtiyaarrada - Xulashooyinka - Xadka ballaadhinta, u dhig Tirada ugu badan ee asxaabta isku xiran halkii durdur ilaa 500.
Xoog ku bilow torrenting: Si aad u dardar geliso soo degsashada, midig u guji faylka durdurka ka dibna dooro Force Start. Midig u guji durdurka markale oo dhig meelaynta Bandwidth meel sare.
Cabirka Faylka: 2.29 MB
Horumar: BitTorrent Inc.